क्लेरटिन बनाम क्लेरटिन डी: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर खेलहरु औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कल्याण चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> क्लेरटिन बनाम क्लेरटिन-डी: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
क्लेरटिन बनाम क्लेरटिन-डी: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
जब यो एलर्जीको मौसममा आउँदछ, एलर्जी औषधीहरू एक-आकार-फिट-सबै प्रकारको समाधान हुँदैन। त्यहाँ धेरै प्रकारका एलर्जी औषधीहरू उपलब्ध छन्, र मौखिक एन्टीहिस्टामाइन्स सबैभन्दा लोकप्रिय हुन्। क्लेरटिन (लोराटाडाइन) एक सामान्य ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हो जसले एलर्जीको लक्षणहरू जस्तै राहत पाउन सक्छ जस्तै नाक बहेको, छींकने, र आँखा खुजली गर्ने। Claritin Claritin-D को रूपमा पनि पाउन सकिन्छ, लोराटाडाइन र pseudoephedrine को संयोजन नाक को भीडसँग लड्न मद्दत गर्न।
एन्टीहिस्टामाइन्स हिस्टामाइनको प्रभावलाई रोक्दा काम गर्नुहोस् जब तपाईं एलर्जीजनहरू जस्तै धुलोकोट वा परागकणको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। हिस्टामाइनबाट भडकाउने प्रतिक्रियालाई अवरुद्ध गरेर, यी औषधीहरूले एलर्जीका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी सँग फरक सामग्री, साइड इफेक्ट, र प्रयोगहरू छन्।
Claritin र Claritin-D बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Claritin र Claritin-D बीचको मुख्य भिन्नता भनेको Claritin-D मा pseudoephedrine भनिने एक थप घटक समावेश गर्दछ। स्यूडोएफेड्रिन एक डिकन्जेस्टन्ट हो जुन नाकको भीड र साइनसको दबाबको थप राहतको लागि थपिएको छ। किनभने pseudoephedrine एक उत्तेजक decongestant हो, Claritin-D Claritin को तुलनामा बिभिन्न साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ।
क्लेरटिन दोस्रो पिढीको एन्टीहिस्टामाइन हो कि उनी निन्द्राको कारण हुन सक्छ। जे होस्, दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सले कम पिरा उत्पन्न गर्दछ जस्तै पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सको तुलनामा बेनाड्रिल (डीफेनहाइड्रामिन)। क्लेरटिन एक्लो भन्दा भिन्न, क्लेरटिन-डीसँग स्यूडोफेड्रिनको उत्तेजक प्रभावका कारण निद्रामा समस्या हुने सम्भावना रहेको छ।
क्लेरटिन (क्लेरेटीन भनेको के हो?) वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जबकि क्लेरटिन-डी (क्लेरटिन-डी के हो?) केवल वयस्कहरू र १२ बर्ष वा माथिका बच्चाहरूलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। नियमित क्लेरटिन सामान्यतया दैनिक एक पटक लिन्छन् जबकि क्लेरटिन-डी १२-घण्टा र २-घण्टा फॉर्म्युलेसनमा आउँदछ; १२-घण्टा Claritin-D दैनिक दुई पटक लिन सकिन्छ र २ effects घण्टा Claritin-D पूर्ण प्रभावको लागि दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ।
Claritin र Claritin-D बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टीहिस्टामाइन (दोस्रो पुस्ता) एन्टीहिस्टामाइन (दोस्रो पुस्ता) र डिकन्जेन्ट
जेनेरिक नाम के हो? Loratadine लोराटाडाइन / स्यूडोफेड्रिन
मौखिक सिरप मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज
मानक खुराक के हो? १० मिलीग्राम दैनिक एक पटक - प्रत्येक १२ घण्टामा mg मिलीग्राम लोराटाडाइन / १२० मिलीग्राम स्यूडोफेड्रिन
- १० मिलीग्राम लोराटाडाइन / २0० स्यूडोफेड्रिन एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि वा लामो अवधि को उपयोग एक चिकित्सक द्वारा निर्देशन अनुसार छोटो अवधि वा लामो अवधि को उपयोग एक चिकित्सक द्वारा निर्देशन अनुसार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरू वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु
Claritin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Claritin मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
सर्तहरू क्लारिटिन र क्लेरटिन-डी द्वारा उपचार गरिएको
Loratadine, Claritin र Claritin-D मा सक्रिय घटक, एलडीसी को लक्षण उपचार गर्न FDA- अनुमोदित छ। नाकबाट बग्ने नाक र छींक लाग्ने लक्षणहरू राइनाइटिसको कारणले हुन्, जुन श्लेष्म झिल्लीको सूजन हो। लक्षणहरूको यो समूह सामूहिक रूपमा चिनिन्छ त्यहाँ ज्वरो आएको छ । लोराटाडाइनले एलर्जीक नेत्रश्लेष्मलाही, वा खुजली, पानी आँखा पनि उपचार गर्न सक्छ।
जबकि क्लेरटिन-डीले माथि उल्लिखित लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छ, यो नाकको भीड र साइनस प्रेशर लक्षणहरूको उपचारको लागि अधिक उपयुक्त हुन्छ जुन एलर्जीको साथ हुन्छ।
दुबै क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी खुजलीको साथसाथै छालाको दाग वा पित्तीहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सर्त क्लेरटिन Claritin-D
नाकको भीड / साइनस प्रेशर हैन हो
के Claritin वा Claritin-D अधिक प्रभावी छ?
क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी दुबैको लक्षणको उपचारको लागि प्रभावकारी छन् मौसमी एलर्जी र बारहमासी (वर्षभर) एलर्जी। सामान्य हल्का एलर्जी लक्षण भएको कसैको लागि, क्लेरटिन लक्षणहरू कम गर्न पर्याप्त हुन सक्छ। अधिक गम्भीर एलर्जी लक्षण भएको कसैको लागि नाकको भीड र साइनस प्रेशर समावेश छ, क्लेरिटिन-डी राम्रो हुन सक्छ।
हाल क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी तुलना गर्ने कुनै ठोस क्लिनिकल अध्ययन छैन। यसको सट्टा, तुलना गरिएको १२ घण्टा क्लेरटिन-डी र २ 24 घण्टा क्लेरटिन-डीबाट एक अध्ययन। दुबै औषधिहरू नाक भरीपन र एक वाह्य नाक को एक प्लेसबोको तुलनामा उपचार गर्न महत्वपूर्ण प्रभावकारी थियो। २--घण्टा क्लेरटिन-डी कम अनिद्रा उत्पादन गर्ने क्रममा प्रभावकारितामा १२-घण्टा क्लेरटिन-डीसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
Zyrtec-D (cetirizine / pseudoephedrine) सँग तुलना गर्दा, Claritin-D अनुनासिक भीडको लागि थोरै कम प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा एलर्जी अध्ययन पत्ता लगाई छ कि छींकने र भीडबाट छुटकारा cetirizine संग सीमान्त रूपमा राम्रो थियो। Loratadine र cetirizine अध्ययन अनुसार साइड इफेक्टमा उल्लेखनीय भिन्नता थिएन।
तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस् कि कुन ओटीसी क्लेरटिन तपाईका लागि उत्तम हुन सक्छ। तपाईंको समग्र लक्षणहरूमा निर्भर रहँदै, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले अर्कोमा एक संस्करण सिफारिस गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई नाकको भीड छ।
कभरेज र क्लरेटिन बनाम क्लेरटिन-डीको लागत तुलना
क्लेरटिन एक ओटीसी ब्रान्ड-नाम औषधि हो जुन सामान्य रूपमा फार्ममा उपलब्ध छ। जेनेरिक लोराटाडाइन प्राय: फार्मेसी, खुद्रा विक्रेता, र किराना स्टोरहरूमा पाउन सकिन्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजना Claritin कभर हुन सक्दैन। बीमा बिना औसत नगद मूल्य tablets० ट्याब्लेटको लागि $ 30 को नजिक छ। तपाईं सिंगलकेयर छुट कार्डसँग कम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईंले कुन फार्मेसी प्रयोग गर्दै यसको आधारमा लागत $ 10.१० लाई कम गर्न सक्नुहुनेछ।
Claritin-D सामान्यतया चिकित्सा र धेरै बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छैन। मनपर्‍यो अन्य ओटीसी एन्टीहिस्टामाइन्स , Claritin-D यसको जेनेरिक फार्म, loratadine / pseudoephedrine मा फेला पार्न सकिन्छ। Claritin-D को औसत खुद्रा मूल्य लगभग $ 45 छ। जहाँसम्म, तपाईं जेनेरिक क्लेरटिन-डी को लागी धेरै बचत गर्न एक एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गर्नाले मूल्य about १ to लाई कम गर्न सक्छ।
मानक खुराक १० मिलीग्राम (of० को मात्रा) १० मिलीग्राम लोराटाडाइन / २0० स्यूडोफेड्रिन (१ 15 को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 18- $ 44 $ १।
एकलकेयर लागत $ - $ १० $ १-- $ २।
Claritin बनाम Claritin-D का सामान्य साइड इफेक्टहरू
क्लैरिटिन र क्लेरटिन-डीको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरूमा टाउको दुख्ने, उनी निद्रा, थकान र सुख्खा मुख समावेश छ। यी औषधिहरूका अन्य सामान्य दुष्प्रभावहरूमा घबराहट र चक्कर आउँछ।
Claritin-D पनि हुन सक्छ अनिद्रा वा समस्या निन्द्राको साथसाथै उत्तेजनात्मकता pseudoephedrine को उत्तेजक प्रकृतिका कारण। स्यूडोफेड्रिनले रक्तचापलाई परिवर्तन गर्न वा बढाउन पनि सक्छ, विशेष गरी उच्च रक्तचापको चिकित्सा इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा।
गम्भीर साइड इफेक्टले क्लेरेटिन वा क्लेरटिन-डीमा कुनै पनि सामग्रीमा एलर्जी प्रतिक्रिया समावेश गर्न सक्छ। यी प्रतिकूल प्रभावहरूमा सास फेर्न कठिनाई, छाती कस, पित्ती, र घरघराना समावेश छ। यदि तपाईंले यी साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने, तुरून्त मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
काउन्टर मा सबैभन्दा प्रभावकारी खोकी औषधि
टाउको दुखाई हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो *
अनिद्रा हैन - हो *
उत्तेजना हैन - हो *
नर्भस हो * हो *
स्रोत: डेलीमेड ( क्लेरटिन ), डेलीमेड ( Claritin D )
Claritin र Claritin-D का ड्रग अन्तर्क्रिया
क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी दुबैमा लोर्याटाइन हुन्छ, जससँग धेरै औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता हुन्छ। एमियोडेरोनसँग लोराटाडाइन लिदा असामान्य हृदय तालको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ Torsades डे पोइन्ट्स ।
Loratadine ले पनि अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू जस्तै एरिथ्रोमाइसिन र केटोकोनाजोल। यी ड्रग्सलाई लोराटाडाइनको साथ सेवन गर्दा शरीरमा लोराटाडाइनको स्तर बढ्न सक्छ जसले फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ। लोराटाडाइनसँग सिमेटीडाइन लिदा पनि उही प्रभाव हुन सक्छ।
Claritin-D को स्यूडोफेड्रिन कम्पोनेन्टले अन्य औषधिहरू जस्तै मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs), बीटा ब्लकरहरू, र डिगोक्सिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ। स्यूडोएफेड्रिनको साथ यी कुनै पनि औषधि सेवन गर्दा नराम्रो प्रभाव हुन सक्छ जुन संवहनी प्रणाली र मुटुलाई असर गर्दछ।
औषधि ड्रग क्लास क्लेरटिन Claritin-D
अमिओडेरोन एन्टिरिथ्यामिक हो हो
Azithromycin CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
Cimetidine H2- रिसेप्टर विरोधी हो हो
Isocarboxazid मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हैन हो
प्रोप्रेनोलोल बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लकरहरू हैन हो
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैन हो
चेतावनी Claritin vs Claratin-D
यदि तपाईंलाई यी औषधीहरूको कुनै पनि सामग्रीसँग एलर्जी छ वा तिनीहरूलाई कहिले एलर्जी भएको छ भने क्लेरटिन वा क्लेरटिन-डी लिनु हुँदैन।
क्लैरिटिन-डी हृदय विकारको साथ सावधानीको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। गम्भीर उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) वा कोरोनरी धमनी रोग भएकाहरूमा पनि यो औषधि हटाउनु हुँदैन। स्यूडोफेड्रिन बढाउन देखाइएको छ रक्तचाप र मुटुको दर केहि मानिसहरुमा
कुनै क्लारेटिन उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग मिर्गौला वा कलेजो समस्याको इतिहास छ। किडनी वा कलेजोको कमजोरीले यी औषधिहरू लिने बेला प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
क्लेरटिन बनाम क्लेरटिन- D को बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
क्लेरटिन (लोराटाडाइन) एक ओभर-द-काउन्टर (OTC) एन्टीहिस्टामाइन हो जुन एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यो एक १० मिलीग्राम ट्याब्लेटको रूपमा लिईन्छ दैनिक बहाइ एकपटक नाक बहने, छींकने, र खुजली लाग्ने, आँखाहरू राहत दिन। क्लेरटिन वयस्क र २ बर्ष र माथिका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Claritin-D के हो?
क्लेरटिन-डी एक ओटीसी एन्टीहिस्टामाइन / डेकोन्जेस्टन्ट हो संयोजन औषधि । यसले लोराटाडाइन र स्यूडोफेड्रिन समावेश गर्दछ। क्लेरटिन-डीले एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ र नाकको भीड र साइनस प्रेशरको लागि विशेष गरी उपयोगी छ। यो वयस्क र १२ बर्ष वा माथिका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी उस्तै हो?
क्लेरटिन र क्लेरटिन-डी दुबैले लोराटाडाइन समावेश गर्दछ। यद्यपि तिनीहरू समान औषधि होइनन्। Claritin-D ले एक उत्तेजक पनि समावेश गर्दछ डिकन्जेन्ट pseudoephedrine भनिन्छ। Claritin-D नाकको भीड कम गर्न सहयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ।
के Claritin वा Claritin-D राम्रो छ?
तपाईंले अनुभव गर्ने एलर्जी लक्षणहरूमा निर्भर गर्दै, क्लेरटिन वा क्लेरटिन-डी प्राथमिकता पाउन सकिन्छ। यदि तपाईंले नाकको भीड वा साइनस प्रेशर अनुभव गर्नुभयो भने, क्लेरटिन-डी यी लक्षणहरू कम गर्न अझ राम्रो हुनेछ। यदि तपाईं हल्का एलर्जी लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, क्लेरटिनले पनि एलर्जी राहतको लागि कार्य गर्दछ।
के म गर्भवती हुँदा क्लेरटिन वा क्लेरटिन-डी प्रयोग गर्न सक्छु?
Claritin र Claritin-D मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ गर्भावस्था को समयमा यदि फाइदाहरू जोखिमलाई पन्छाउँछन् भने। गर्भवती भएको बेला क्लारिटिन वा क्लेरटिन-डी प्रयोग गर्नु अघि चिकित्सा सल्लाहका लागि डाक्टर वा फार्मासिष्टको सल्लाह लिनुहोस्।
म रक्सीको साथ Claritin वा Claritin-D प्रयोग गर्न सक्छु?
यो छ सामान्यतया सिफारिश गरिएको छैन रक्सी पिउन जब Claritin उत्पादनहरु लिन। रक्सी र क्लेरटिनको मिलनले कम सुस्ती र चक्कर आउने बृद्धिबाट हुने जोखिम बढाउन सक्छ।
के Claritin-D ले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँछ?
निन्द्रा क्लेरेटिन-डीको सम्भावित साइड इफेक्ट हो। जहाँसम्म, केहि व्यक्तिको लागि यो वास्तवमा अनिद्रा वा निद्रामा समस्या हुन सक्छ। यो किनभने क्लेरिटिन-डीमा स्यूडोएफेड्रिन छ - एक डिकोजेन्टेन्ट जसले उत्तेजक प्रभावहरू गर्दछ।
के Claritin-D ले चिन्ता निम्त्याउँछ?
नर्वस र एक्जिटबिलिटी Pseudoephedrine का उत्तेजक प्रभावका कारण Claritin सँग सम्बद्ध साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्। तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईले कुनै साइड इफेक्ट जस्तै गम्भीर चक्कर आउने वा बेचैनी महसुस गर्नुभयो।
के क्लेरटिनले बलगम सुक्छ?
हो यो सम्भव छ कि क्लेरटिनले बलगम सुकाउन सक्दछ। क्लेरटिन प्रयोग गर्नाले सुख्खा साइड इफेक्टको घटना बढ्न सक्छ। सुख्खा मुख क्लारेटिन र अन्य एन्टीहिस्टामाइन ड्रग्स को एक अधिक सामान्य दुष्प्रभाव हो।
Carvedilol खुराक, फारम, र शक्तिहरू
तपाइँ कति पटक डेपो शट लिनुहुन्छ?
zoloft को औसत खुराक के हो
डेपो पहिलो पटक कती प्रभावकारी छ
तपाइँ काउन्टर मा toradol किन्न सक्नुहुन्छ
ptsd कुन उमेर समूह को मान्छे मा सबैभन्दा सामान्य छ
म बिरामी हुँदा के खाने?